RPET Jira (Rakadzokororwa PET Mucheka) inozivikanwawo sekokasi bhodhoro jira jira.
RPET Jira (Rakadzokororwa PET Mucheka) inozivikanwawo sekokasi bhodhoro jira jira. Iyo mhando nyowani yegirini yakasvibirira Jira rakagadzirwa nekudzokorodza rakakosheswa PET shinda. Yayo yakadzika kabhoni mavambo yakagadzira iyo nyowani pfungwa mumunda wekumutsiridzwa Maererano nekuongorora kwekuyedza, inogona kuchengetedza ingangoita makumi masere ...
China inozivisa 'hondo' pakusvibiswa kwepurasitiki
China iri kuedza kudzikisira kushandiswa kwezvinhu zvisiri-zvinogadziriswa zvigadzirwa zvepurasitiki nekuvandudza mutemo wepurasitiki, makore gumi nemaviri mushure mekurambidzwa kwatanga kuiswa pamabhegi epurasitiki. Kuziva munharaunda nezvekusviba kwepurasitiki kwakanyanya kuwedzera mumakore achangopfuura, uye Chi ...
Jiafeng Kambani: RPET zvigadzirwa ichave iri tsika yekusimudzira kusimudzira kwezvinhu mune ramangwana.
Iye zvino zvave kukurumidza kuchengetedza nharaunda.Mazhinji maindasitiri anoona kukosha kwekupararira kwehukama uye kujoina muRPET uye voita mupiro kupasi kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.RPET Jira (Rakashandiswazve PET Jira) inozivikanwawo secoke bhodhoro jira jira,. ..
Ndiro bhodhoro rekare rehupenyu hutsva, Coca-Cola RPET amburera yezuva "yakagadziriswa" Qingdao North Railway Station
Muna Nyamavhuvhu, 2020, panzvimbo huru yekuyambuka vanofamba netsoka yeQingdao North Railway Station, amburera dzakasarudzika dzakaiswa, izvo zvinhu zvine Qingdao hunhu senge pfapfaidzo, seagull uye dhizaini zvakadhindwa. Ainyanya kushamisa aive mazwi "ini ndaimbova bhodhoro repurasitiki ...